Khiqiza elungile kwebhethri kungenzeka ongoti amasevisi, ezihlinzeka ngalolu sizo. Kodwa uma ungafuni ukuchitha isikhathi sabo nemali, ungenza ngokwakho. Okokuqala ususe ibhethri lakho kusukela imoto. izingcweti eziningi zingenza ishaja nebhethri imoto ngesandla. Kuyinqubo yokunikeza elula. Ungasebenzisa uhlelo olukhethekile, echaza ukuxhumana kudingeka. Qaphela bese uyazama ukulandela yonke imithetho yokuphepha.
Kunconywa ukuba ukushaja endaweni ekhethekile, ukuze singathwesi donsa izinto eziyingozi ukuthi zikhishwa ngesikhathi senqubo. Ochwepheshe kuqashelwe ukuthi amadala ibhethri, lo ezinobuthi ngaphezulu ivela kuye. Uma ungenayo i-igalaji kahle umoya, le nqubo ke kungaba kwenziwe ngqo ngaphandle. Nakekela ukuvala akazange avule umlilo futhi noma kunjalo ungabhemi.
Ukushaja ibhethri kungenziwa ngezindlela ezimbili: esebenzisa DC voltage 15 W noma i-DC. Ukuze bazogcwalisa ngokugcwele amandla iyunithi, kuzomele amahora mayelana 14-16, futhi sengisiza ezivamile - usuku lonke.
I-oda of ukushaja
Okokuqala udinga ukususa esibulalayo omubi, bese kakade futhi omuhle. Khona-ke ukususa ngezikulufo kusukela isembozo ukuthi ivikela electrolyte. Phakathi ukushaja, zonke Imigudu zivuliwe. engeza ngokucophelela nesilinganiso esifanele samanzi ukuze ezingeni elithile. Qaphela, ngenxa yobudedengu ungathola ukusha. Ngaphezu kwalokho kuhlanganisa ishaja nebhethri. Uzodinga okungenani amahora angu-10 ukuba enze zibe sebuthweni lezokuvikela amandla kule divayisi. Umcibisholo ku ishaja, uzokwazi ukuba kutholakale umsuka wendaba yesihluku isimo ibhethri lakho. Khubaza idivayisi kumele kube ngesikhathi, uma kungenjalo zingase zephule ipuleti. Uma ibhethri yakho iphelelwe yisikhathi, bese ishaja ngoba ibhethri imoto, enziwe ngezandla zakhe, noma cha, ngeke kukusize. Uma kahle ukushaja aliphumi ngenhla 60 per cent, ngaphandle ukulungisa Awukwazi ukwenza lapha. Indlela yokuthola ngayo voltmeter. Voltage yebhangqa ibhethri phambili kufanele kube 2.11 V, futhi zonke eziyisithupha kwesigaba ibhethri - 12,66 V
Special ishaja kwebhethri ibhethri imoto, ukudala yayo, kufanele bulethe icala degrees kusuka -15 kuya +40. Uma lokhu Inkomba ingaphandle leli banga, isidingo noma ubandise idivayisi. Uma kwenzeka ebusika, ungakwazi ukuxoxa ibattery egumbini, kungenjalo, kungonakalisa ngokuphelele. Ungazami ukwenza icala esijule kakhulu, njengoba kungalimaza idivayisi yakho. Sekuyisikhathi eside imfihlo ukuthi ishaja imoto kungenziwa nge ezivamile ugesi. Nokho, le ndlela ithatha isikhashana. Futhi ukuthola isikimu ngawo ungenza ishaja yangempela semoto ibhethri ngezandla zakho, ngokwanele nje.
Mercedes GL 400: Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Kuphi futhi kanjani ngomshini ukubopha akwazi ukugcina? Groove ukubopha akwazi ukugcina ngaphandle kokukhipha